တစ်သီးပုဂ္ဂလ ဆရာများ | /// stage /// – အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာရန် နည်းလမ်းသစ်
တစ်သီးပုဂ္ဂလ အင်္ဂလိပ်ဆရာများအတွက် English Attack!
ဆရာများစွာသည် English Attack! ကို ၄င်းတိုတပည့်များနှင့် တစ်ယောက်ခြင်း သို့မဟုတ် အုပ်စုလိုက် သင်ခန်းစာများကို ရင်းမြစ်များအဖြစ် အသုံးပြုနေကြပါသည်။
သင်ယူမှုယူနစ်များ(ဗီဒီယို အခြေခံလေ့ကျင့်ခန်းများ၊ ဂိမ်းများနှင့် ပုံပြအဘိဓါန်)၏ ပုံစံနှင့် အသုံးပြုပုံသည် စာသင်သားများ၏ ကြိုးစားလိုစိတ်ကို တွန်းအားပေးပြီး ဆရာ-ကျောင်းသားဆက်ဆံရေးကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပါသည်။
English Attack! သည် မိမိဘာသာ သင်ယူလေ့လာသူများမှ အသုံးပြုလျှင်လည်း အထူးထိရောက်မှု ရှိပါသည်။
English Attack! ကို တစ်သီးပုဂ္ဂလဆရာ Booster Pass ဖြင့် မှာယူခြင်းသည် သင့်သင်တန်းသားများနှင့် တစ်ယောက်ချင်း သို့မဟုတ် အုပ်စုလိုက်သင်ခန်းစာများအတွက် အထူးသီးသန့်ကိရိယာများကို သုံးစွဲနိုင်စေပါသည်။
တစ်သီးပုဂ္ဂလဆရာ Booster Pass
English Attack! နှင့် သီးသန့်သင်ခန်းစာများ
စာသင်သားတစ်ဦးအနေဖြင့် ဆိုက်တွင် ပေးထားသည့်ခေါင်းစဉ်များ(ဥပမာ ရုပ်ရှင်ဖြတ်ပိုင်း သို့မဟုတ် သတင်းများ)နှင့် ရင်းနှီးအောင်လုပ်ထားခြင်းဖြင့် သင်ခန်းစာအတွက် ပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။ သင်ခန်းစာ မစတင်မှီ စာသင်သားများသည် Video Booster (အပြန်အလှန်လေ့လာနိုင်သော ဗီဒီယို လေ့ကျင့်ခန်း) နှင့်ဆက်စပ် ဗီဒီယိုများ Photo Vocab(ပုံပြအဘိဓါန်) နှင့် အခြားဝေါဟာရများကို ကြိုတင်လေ့လာနိုင်ပါသည်။
သင်ခန်းစာအတွင်းတွင် ပိုမိုအားစိုက်ရန်လိုအပ်သော သဒ္ဒါသို့မဟုတ်ဝေါဟာရများကို သင်တန်းသားနှင့်အတူ လေ့ကျင့်ခန်းများ ပြန်လှန်လေ့ကျင့်နိုင်ပါသည်။
သင်ခန်းစာများကို လေ့ကျင့်ခြင်းဖြင့် သင့်စာသင်သားသည် Video Booster နှင့် Photo Vocab များကို အသုံးချပြီး လေ့လာပြီးဝေါဟာရအသစ်များကို မှတ်မိစေနိုင်ပါသည်။
Video Boosters များအကြောင်း
Photo Vocabs များအကြောင်း
Practice Games များအကြောင်း
တစ်သီးပုဂ္ဂလဆရာ Booster Pass ၏ ကောင်းကျိုးများ
သင့် စာသင်သားများကို English Attack! ရှိ သင့်သင်တန်းသို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါ
သင့်တစ်သီးပုဂ္ဂလဆရာ Booster Pass တွင် ကျောင်းသားဖိတ်ေ်ခ်ါကုဒ်ပါရှိပါသည်။ ထိုကောင့်ကို အသုံးပြုပြီး အကောင့်ဖွင့်ခြင်းဖြင့် သင့်သင်တန်းသားများသည် English Attack! ရှိသင့်စာသင်ခန်းနှင့် အလိုအလျောက် ချိတ်ဆက်ပြီး ဖြစ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
သင့်မှာယူမှုတွင် ဝိဇ္ဇာသိပ္ပံအကြောင်းအရာပေါင်းစုံကို ဝင်ရောက်နိုင်ခွင့်ပါဝင်ပြီး ၄င်းတို့အနက် သင်နှစ်သက်ရာကို သင့်ကျောင်းသားများသို့ လေ့ကျင့်ခန်းပေးနိုင်ပါသည်။
စာသင်သားများသည် ဆိုက်ရှိ သင်ဖန်တီးပေးထားသော "ကျွန်ုပ်၏ ကျောင်း" ကိုဝင်ရောက်ပြီး ပေးထားသော လေ့ကျင့်ခန်းများကို လုပ်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ တွဲဖက်ပါဝင်သည့် စာတိုဘုတ်သည် သင့်ကို သင့်သင်တန်းသားများနှင့် ဆက်သွယ်နိုင်စေပြီး ဆရာဒတ်ရ်ှဘုတ်သည် သင်တန်းသားတစ်ဦးစီတိုင်း၏ အသုံးပြုမှုကြိမ်ရေ၊ အဆိုင်းမင့် ရလာဒ်များနှင့် သင်တန်းသားတိုင်း၏ တိုးတက်မှုကို စောင့်ကြည့်နိုင်စေပါသည်။
သင့် ဖိတ်ခေါ်ကုဒ်၏ ကျေးဇူးဖြင့် သင့်သင်တန်းသားများအနေဖြင့် Booster Pass ဝယ်လိုပါက အထူးကျောင်းသားလျှော့ဈေး ခံစားခွင့်များ ရနိုင်ပါသည်။
တစ်သီးပုဂ္ဂလ Booster Pass ဈေးနှုန်းပလန်များ